Ndị na-ekesa mmiri → Ahụike • Gyms • Mmiri ọrinụrinụ na Gym Warsaw
Need chọrọ onye na-enye mmiri na klọọkụị, gyms? Companylọ ọrụ Water Point na-enye onyinye ndị na-abụghị mmiri cylinder, ndị na-akersụ mmanya, isi mmalite nke ndị isi ụwa na ụlọ ọrụ ahụ, nke anyị bụ ndị nkesa naanị na Poland.
Ihe omume egwuregwu na mmega ahụ ọ bụla na-eme ka ahụ anyị gwụ ngwa ngwa mmiri na mineral bara uru dị n’ime ya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ị jigharịa ihe ndị a mgbe niile ma na-elezi mmiri na ihe ndị dị na nri ahụ anya.
Nke a na - eme ka mmiri dị ọcha na mmiri dị ọcha n'oge ike. Nsacha nke ọma, mmiri dị ọcha nke nwere mineral nwere ike ịdị mgbe niile na klọọkụịsị na gyms maka ndị na-a waterụ mmiri ọgbara ọhụrụ.
Ndị na-eji klọb mma yana ndị mmadụ na-arụ ọrụ ebe ahụ ga-enwe ekele maka uto na ịdị mma nke mmiri dị mgbe niile site na onye na-ere ihe.
Ndị na-agba mmiri cylinder na-enweghị mmiri ọ connectedụ connectedụ jikọtara na sistemụ mmiri na-eme ka mmiri dị ọcha na-aga n'ihu ma na-enweghị nsogbu n'oge ọmụmụ ma ọ bụ nkwụsịtụ n'etiti ha.
Dị ọgbara ohuru nke ndị na-eme ihe, kwekọrọ na ime ụlọ ọ bụla nke mgbatị ahụ na gyms, bụ uru ndị ọzọ ebe a.
Ngwaọrụ ndị a nwere ike ịdị na ohere ọ bụla maka ahụ ike, dịka ọmụmaatụ n'ebe ezubere maka izu ike ma ọ bụ na mgbatị ahụ.
Amara na iji mee ka ahụike gị na ahụike gị, ị ga-a atụ mmiri mmiri 2 nari kwa ụbọchị, mgbe a na-emega ahụ, mkpa ahụ mmiri nwere na-abawanye nke ukwuu na ọnụọgụ ya ga-aba ụba.
Mmiri metụtara usoro ndu mmiri ọgwụ niile dị n’ime anyị. Rationme ahụ nke ọma iji mee ka ị na-arụ ọrụ na mmega ahụ nke ọma. Waterụ mmiri mgbe ị na-emega ahụ na-eme ka ahụ dịkwuo mma ma na-eme ka ọzụzụ dịkwuo mma. Ego ole ka mmiri drunkụbigara n’oge ọmụmụ kwesịrị ịdabere n’ogologo na ike nke mgbatị ahụ, yana ọnọdụ ikuku.
Maka ndị na-azụ, ebe ha na-azụ, ikuku ya na akụrụngwa dịkwa mkpa. Taa, a na-elebara anya maka ndụ dị mma, ya mere a na-elebara ma ụlọ oriri na ọ restaurantụ isụ ahụ nwere ike ị nweta nkasi obi ọzọ, ma ọ bụ ezigbo mmiri dịnụ n'oge ọzụzụ.
Onye na - ekesa mmiri na - a drinkingụ mmiri nwere ike imezu atụmanya ndị dị otú a, yabụ ọ na - eme ka ịmawanye mma na ugwu nke ụlọ ahụ dịkwuo elu.
Onye na-eweta mmiri dochie anya usoro ọdịnala nke mmiri ịnweta. A na-edobe mmiri na-a Dụ mmiri na ụlọ ọrụ, gyms na klọb mgbatị ahụ iji mee ka nkasi obi nke ịnọ ebe ndị a dị mma, yana akụrụngwa kachasị mma eji eme ihe na ngwa ndị a na - eme ka ha bụrụ ihe ịchọ mma nke ụlọ.
Mmiri a na-eweta dị mma mgbe niile.
Ndị na-a waterụ mmiri na -eme mmiri bụ ihe dị ndụ na nke dị ọnụ ala iji rụọ ọrụ azịza ya mere ha na-apụtawanye n'ọtụtụ ebe ọha, ụlọ ọrụ, ọfịs, klọb na mgbatị ahụ.
Teknụzụ ọgbara ọhụrụ eji eme ihe nke ndị na-ewepụta ihe na-enye ohere iji rụọ ọrụ kachasị mfe.
ọcha na klọb ahụ mmammiri dị ọcha na mgbatị ahụmmiri efu na mgbatị ahụonye na-enye mmiri na mgbatị ahụisi iyi na klọb ahụ mmapitniks na ahụ ikena-aerụ mmanya na klọb ahụ mmammiri na mgbatị ahụmmiri na klọb ahụ mma